နောက် (၄၈) နာ ရီ မှ (၉၆) နာရီ အ တွင်း မိုးကြီး နိုင် တဲ့ ဒေသတွေ (တောင် သူကြီးတွေ အ ကြိုက် မိုး လာ ပါပြီ ဗျာ…..) – GaMone Media
Homepage / Local News / နောက် (၄၈) နာ ရီ မှ (၉၆) နာရီ အ တွင်း မိုးကြီး နိုင် တဲ့ ဒေသတွေ (တောင် သူကြီးတွေ အ ကြိုက် မိုး လာ ပါပြီ ဗျာ…..)
နောက် (၄၈) နာ ရီ မှ (၉၆) နာရီ အ တွင်း မိုးကြီး နိုင် တဲ့ ဒေသတွေ (တောင် သူကြီးတွေ အ ကြိုက် မိုး လာ ပါပြီ ဗျာ…..)
စစ်တွေ ပေါက်တော ကျောက်တော် မြောက်ဦး မင်းပြား ဘူးသီးတောင် ရသေ့တောင် မောင်းတော ပလက်ဝ မတူပီ မင်းတပ် ဟားခါး ထန်တလန် ဖလမ်း တီးတိန် တွန်းဇံ ဂန့်ဂေါ ကလေး မော်လိုက် ခမ်းပတ် တမူး ထီးလင်း ကျောက်ထု ကန်ပက်လက် မိုးကြီးနိုင် ပါတယ်….
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် တို့တွင် မုတ်သုံလေအားကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဒေသအလိုက် နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီး နိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။
မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင် မှ မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၁)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးပိုနေမည်။
နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက် ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။
နောက် ၄၈နာရီမှ ၉၆နာရီအတွင်း မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ (တောင်သူကြီးတွေ အကြိုက်မိုးလာပါပြီဗျာ…..)
စစ်တွေ ပေါက်တော ကျောက်တော် မြောက်ဦး မင်းပြား ဘူးသီးတောင် ရသေ့တောင် မောင်းတော ပလက်ဝ မတူပီ မင်းတပ် ဟားခါး ထန်တလန် ဖလမ်း တီးတိန် တွန်းဇံ ဂန့်ဂေါ ကလေး မော်လိုက် ခမ်းပတ် တမူး ထီးလင်း ကျောက်ထု ကန်ပက်လက် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်….
Previous post ယာဉ်တိုက် မှု တစ်ခု ကြောင့် ကွယ်လွန် သွားခဲ့ရတဲ့ မေသစ္စာမောင် ရဲ့ ရင့်နင့် စရာ နောက်ဆုံး ခရီးပုံရိပ်များ
Next post ယနေ့ရုံးချိန် မှာ အာမခံပေးဖို့ မလွယ်ကူတဲ့ အခြေအနေ တစ် ခုမှာရှိနေတဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ အမှုအနေအထား ကိုပြော ပြလာခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ရှေ့ နေ